Abaaro iyo Dagaalo Saameeyay shacab badan kuna sababay in eey ka qaxaan Deegaankoodii – MUDUGPOST
You are here: Home Abaaro iyo Dagaalo Saameeyay shacab badan kuna sababay in eey ka qaxaan Deegaankoodii
Posted on July 19, 2017 by MUDUGPOST | 0 Comments
Wararka ka imaanaya Gobolka Mudug gaar ahaan Degaanada hoostaga Degmada Xarardheere ayaa laga soo sheegayaa in Dad badani halkaas isaga qaxeen sababo la xariira Dagaalo iyo abaaro halkaas ka jira.Dad badan oo isugu jira dad tabar yar ,Waayeel, caruur iyo dumar ayaa gaaray Degmada Godinlabe ee ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Dadkii halkaas tegay Ayaan ilaa hada helin wax taakuleeyn ah. Wararka ayaa intaas ku daraya in xaalada halkaas ka jirta eey tahay mid laga soo deeyrinayo. Dadkaas Ayaan heeysan wax taakuleeyn ah amaba eeysan heeysan Hooy, Biyo iyo Cuntaba. Hadaba Markii aan la xariirnay Dadka deegaanka ayaa ka codsaday Doowlad Goboleedka Galmudug, Tan Federaalka iyo dhamaan Heeyadaha Caalamiga in loo fidiyo Gargaar deg-deg ah.
Wixii Faahfaahin fadlan kala soo xariir